Odoyaasha dhaqanka oo DFKS ku eedeeyay faragalin-qaawan inay ku-hayaan hawlahooda. – Radio Daljir
Luulyo 4, 2012 5:02 g 0
Moqdisho, July, 04 ? Waxgaradka Soomaalida ee ku sugan Moqdisho, kuna mashquulsan xulitaanka ergada ansixinta iyo diidmada Dastuuska Soomaaliya, iyo keenida ?baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in DFKS ay ku hayso faragalin-qaawan.
Garaad Jaamac Garaad Cali oo ka mid ah odoyaasha dhaqanka oo u waramay warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegay in bishaan 12-keeda laga dhawrayo odoyaashu inay ansixiyaan Dastuurka, waxaase uu wax-lala yaabo ku tilmaamay in dawladdu ay odoyaasha u sheegtay inaysan diidi-karin Dastuurka, balse kalliya talo ay ku leeyihiin hawlaha xilligaan socda.
Garaadka ayaa sheegay in maalintii shalay ahayd loo balansanaa in odoyaashu ay soo gudbiyaan ergeda ansixinta Dastuurka, balse waxaa uu xusay inuu jiro mad-madaw wali uga dhex-muuqda Dastuurka, ayna qabsadeen illaa 6-da bishaan July si ay waxgaradku uga fara-buuxdaan Dastuurka cusub ee Soomaaliya.
Shalay ayay ahayd markii ku Simaha R/Wasaaraha Soomaaliya ahna wasiirka ganacsiga ee Soomaaliya C/wahaab Ugaas Xuseen Ugaas Khaliif oo la hadlay odoyaasha dhaqanka ayuu wuxuu sheegay inaysan jirin cid qasbaysa, asagoona sheegay in odoyaasha dhaqanka looga baahanyahay in aysan odoqon odoyaashii ugu nasiibka xumaa.